» उता प्रचण्ड र केपि ओलि सग सम्बन्ध चिसिदै गएको बेला, डा. बाबुराम भट्टराईले मिलेर नयाँ पार्टी बनाउ भन्दै प्रचण्ड सग प्रस्ताब राखेको छ्न!के मान्लान त प्रचण्ड?हेर्नुहोस उता प्रचण्ड र केपि ओलि सग सम्बन्ध चिसिदै गएको बेला, डा. बाबुराम भट्टराईले मिलेर नयाँ पार्टी बनाउ भन्दै प्रचण्ड सग प्रस्ताब राखेको छ्न!के मान्लान त प्रचण्ड?हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
उता प्रचण्ड र केपि ओलि सग सम्बन्ध चिसिदै गएको बेला, डा. बाबुराम भट्टराईले मिलेर नयाँ पार्टी बनाउ भन्दै प्रचण्ड सग प्रस्ताब राखेको छ्न!के मान्लान त प्रचण्ड?हेर्नुहोस
काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्तरद्वन्द चर्किएका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्र,चण्डसंग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आइतबार बिहान प्र,चण्ड संग भएको टेलीफोन कुराकानीमा भट्टराईले यस्तो प्रस्ता,व राखेको जनाइएको छ ।आइतबार भट्टराईले प्र,चण्डलाई फोन गरेका हुन । स्रोतका अनुसार डा.भट्टराई र प्रचण्डबीच करिब आधा घण्टा कुराकानी भयो ।
त्यसक्रममा डा.भट्टराईले प्र,चण्डलाई नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अप,मान सहेर नबस्न पनि सुझाव दिएका छन् ।यसको जवाफ प्र,चण्डले डा. भट्टराईलाई नदिएको पनि जनाइएको छ ।
दुबै नेता पूर्व माओवादीमा पहिलो र दोस्रो वरियतामा रहेर लामो समय संगै राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् । १० वर्षे सशस्त्र सं`घर्षदेखि शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम च,रणसम्म पनि सँगै पार्टीमा बसेर प्र,चण्डसँग सहकार्य गरेका भट्टराई संविधान जारी भएलगत्तै पार्टी परित्या`ग गरेर नयाँ शक्ति ग,ठनको अभियानमा जुटेका थिए।
प्र`चण्डलाई बाबुरामको फोन, ओलीको अप`मान सहेर नबस्न सुझावत्यसपछि दुई नेताबीच लामोे समयसम्म आ`रोप- प्रत्या`रोप चलेको थियो।हाल डा. भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष छन् ।
पुराना सहयात्री प्रचण्ड र भट्टराई केही समय अघि संगै मञ्चमा देखा परेका थिए । प्रच`ण्ड र भट्टराई दुवैले आफूहरु मिल्ने परिस्थिति आएकोे बताएका थिए। अहिलेसम्मका राजनी,तिक उपलब्धि जोगाउन आफूहरुको सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।
प्रचण्डले आफूहरुलाई एकअर्काको भावना बुझ्न क,ठिन नभएको भन्दै सहकार्यको आवश्यकता औल्याए। प्रच`ण्डले विमतिकाबीच पनि सहमतिको विन्दु भेटिने वि,श्वास व्य,क्त गरे ।
प्र,चण्डले सहकार्यको कुरा गरेपछि बाबुरामले पनि सोही आश,यको भनाइ राखेका थिए।बाबुरामले हालसम्म प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षाका लागि आफूहरुबीच सहकार्य हुने बताएका थिए। जनादेश खबर बाट